Chromecast ee Windows 10 - Sida loo Download & Setup - Sida Loo
Chromecast ee Windows 10 - Soo dejiso & Deji (Hagaha)
Chromecast waa qalab caan ah oo geeyo Google. Dhammaanteen waxaan ku raaxeysaneynaa inaan ka sii daayo waxyaabaha ku jira telefishankeenna. Chromecast wuxuu kuu fududeynayaa inaad daawato bandhigyo cusub dadaal la'aan. Dad badan ayaa haysta kombuyuutarradooda si ay ugu fududaan karaan. Isticmaalayaasha hadda si sahal ah ayey uga tuuri karaan kombuyuutarkooda qalabka Chromecast. Waa fududahay in la isticmaalo madal loogu talagalay madadaalo fantastik ah. Tilmaamahan, waxaan ku soo bandhigi doonnaa sida fudud ee loo tuuro fiidiyowyada aad jeceshahay, sawirrada, iyo waxyaabo badan oo ka socda Windows PC.
Qaar badan oo ka mid ah sanduuqyada geeyo kombuyuutarka ee gaarka loo leeyahay ayaa dhowaan noqonaya kuwo duugoobay. Haddii aad horey u laheyd Chromecast, ka dib fiiri hageheena khabiirka ah.
Ku rakib Chromecast on Windows - Hagaha
Nidaamka loo dejinayo Chromecast waa mid fudud. Waa hab fantastik ah oo lagu daawado wixii nuxur ah oo bilaash ah. Qof kasta ayaa ka baari kara aaladdan kumbuyuutarkooda. Tallaabooyinku waa kuwo aan dadaal badan lahayn, qof walbana wuu raaci karaa. Waxay ka shaqeysaa dhammaan barnaamijyada, oo ay ku jiraan qalabka Windows 10. Halkan waxaa ah hagaha dejinta khabiirkeenna ee dhammaan isticmaaleyaasha daaqadaha. Isku day maanta si aad u yareyso culeyskaaga ku aaddan bixinta adeegyada.
Talaabada ugu horeysa waa mid toos ah. Isticmaalayaasha cusub waa inay qabtaan hagaha aasaasiga ah ee Chromecast.Waxaad ku ordi kartaa qalabkaaga TV-ga. Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay ku dhejiyaan fidinta yar ee HDMI dhinaca TV-ga. Ku xir Chromecast ilaa ilo koronto. Waxay kaa caawin doontaa inaad qalabka kor u qaaddo oo shaqeyneyso. Hadda waxay diyaar u tahay in laga soo tuuro waxyaabaha ku jira aalad kasta oo u dhow.
Intooda badan isticmaaleyaasha internetku waxay horeyba ugu shaqeeyaan google chrome kombuyuutarkooda. Dad aad u tiro yar ayaa adeegsada Microsoft’s Edge, sida aniga oo kale. Isticmaalayaasha noocaas ah, waxaan kugula talineynaa inaad soo dejiso biraawsarka Google Chrome. Waa shuruud qasab ah in lagu ordo qaabka wax lagu ridayo kombiyuutarkaaga. Qalabka Google wuxuu si wanaagsan ula fal galaa barnaamijka Google.
Soo Degso Chrome
Isticmaalayaasha cusub ee Chromecast waxay aaladooda ku sameyn karaan iyagoo adeegsanaya kumbuyuutarkooda Windows 10. Waa bilaa dadaal umana baahna dadaal badan.Waa inaad booqataa xiriirka soo socda . Waxay kuu geyn doontaa bogga qalab dejinta. Halkan waxaad ka arki kartaa jawaabta si aad uga sameysatid PC-gaaga Chromecast. Waa hawl toos ah. Guji 'Deji Chromecast-kaaga' adoo isticmaalaya badhanka PC-gaan.
Chromecast-kaaga wuxuu ubaahan yahay isku xirnaanta isla shabakada WiFi. Waa hab fudud oo lagu hubiyo inaad isla markiiba qalab aad sameyn karto. Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay isku meel ku xirnaadaan. Waa shuruudaha lagama maarmaanka u ah tuurista aaladda Chromecast. Ma qaadanayso wax badan oo ka mid ah xadkaaga internetka.
Waxaan rajeyneynaa in hagaha uu awoodaa inuu nadiifiyo shakigaaga ku saabsan habka dejinta. Waa mid toos ah in loo raaco qof kasta. Ku billow qulqulka TV-gaaga si fudud adigoo adeegsanaya qaabkan. Waxaan kugula talineynaa qof walba oo ku raaxeysta waxyaabaha bilaashka ah ee internetka. Way kufiican tahay socodka tooska ah.
Sidee loo Dhex Maraa Qalabka Windows?
Isticmaalayaasha Windows 10 waxay ku tuuri karaan Google Chromecast adoo adeegsanaya biraawsarka biraawsarka.Waa hab fudud oo wax ku ool ah isticmaalkaaga. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso maanta. Waa kuwan tallaabooyinka.
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo booqanaya degel kasta oo fiidiyow ama sawir leh. Internetku waa meel ballaadhan, waxaadna ka heli kartaa bandhigyo badan oo cajiib ah, filimaan, iyo sawirro aad wadaagi karto. Way kafiican tahay in lagu daawado waxa kujira shaashad weyn. Tilmaamahan, waxaan ku booqaneynaa fiidiyow aan kala sooc lahayn Youtube.
Si aad ugu daadiso waxyaabaha ku jira shaashadda websaydhkaaga, waa inaad midig-gujisaa bogga. Waa wax fudud oo aad waxtar u leh. Waxaad arki kartaa xulashada kabka isla markiiba. Guji badhanka kabka si fudud ula wadaag qalabkaaga Chromecast. Way kufiican tahay qofkasta oo daawada bandhigyo badan, filim kumbuyuutarkooda. Waxa kale oo ay ka dhigaysaa qulqulka fudud. Isticmaalayaasha waxay ku maareyn karaan nuxurka ilo badan oo dhinac saddexaad ahInternetka.
Haddii kale, isticmaalayaashu waxay sidoo kale riixi karaan saddexda dhibic ee midigta kore ee shaashadahooda biraawsarka. Waxay keeneysaa ikhtiyaarka shubista ee qalabka Windows 10. U isticmaal tan si aad ula wadaagto shaashaddaada Chromecast kombiyuutarkaaga si fudud.
Qalabka Chromecast wuxuu leeyahay tanooyin waxtar u leh adeegsadayaashiisa. Waxaan kugula talineynaa inaad maanta isku daydo inaad ka faa'iidaysato faa'iidooyinkan. Way ku habboon tahay qof kasta oo doonaya madadaalo tayo leh qiimo macquul ah. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee Chromecast.
1. Ka soo qulquli boqolaal barnaamij
Chromecast wuxuu asal ahaan taageeraa kumanaan barnaamijyada fiidiyowga ah ee Android iyo iOS iyo barnaamijyada sawirrada ah.Waxay sidoo kale leedahay taageero loogu talagalay adeegga qulqulka muusikada caanka ah ee Spotify. Qof kastaa wuxuu u adeegsan karaa qalabkan xalalkiisa madadaalo oo dhameystiran. Telefoonkaaga ayaa si buuxda gacanta ugu haya barnaamijyadan. Qof kasta ayaa kula wadaagi kara shaashaddiisa internetka. Isticmaalayaasha way hakin karaan, ciyaari karaan, waxayna kordhin karaan mugga taleefannadooda. Waa wax si fudud loo heli karo. Dhamaan barnaamijyada madadaalo ee waaweyn sida Netflix, Amazon Prime Video, Youtube waxay taageeraan muuqaalka tuurista.
2. Isku xirnaanta
Google waxay ka shaqeyneysaa nidaamka deegaanka ee qalabkooda oo dhan. Isticmaalayaasha hadda waxay la midoobi karaan aaladaha Google Home / buulkeeda Chromecast.
Waxay awood kuu siineysaa inaad daawato bandhigyada aad ugu jeceshahay iyo amarrada codka. Waxaad kuheli kartaa ismaamul dhameystiran qaabkan. Waxaad awood u leedahay inaad si buuxda u maamusho qulqulka adeeggan. Waa iskudhaf madadaalo casri ah oo casri ah. Waxaan kugula talineynaa dhamaan kuwa jecel tikniyoolajiyadda inay isbarbar dhigaan labada aalad.
Qalabka Chromecast ayaa ku cusub suuqa. Isticmaalayaal badan ayaa isku dayaya astaamaha cayaareed ee cajiibka ah ee lagu heli karo iibsashada. Waxaad isku dayi kartaa cinwaanada caanka ah ee loo maro barnaamijyada tuubista ee qaybta saddexaad. Adeegga google stadia wuxuu ka dhigayaa cayaaraha si fudud qof walba u heli karo.
Waxaad kuheli kartaa khibrad aad u wanaagsan ciyaarta adoo adeegsanaya Chromecast oo leh rukumadan. Cinwaanno madaxbannaan sida Just Dance ayaa haddaba shaqeynaya iyadoon wax rukun ah oo dheeri ah lahayn.
Booqasho - https://stadia.google.com/ .
Mustaqbalku wuxuu u ifaya dhammaan dadka isticmaala Chromecast. Waxaan kugula talineynaa inaad maanta tijaabiso madal maanta waayo-aragnimo qiimo leh.
Chromecast waa aaladda asalka iyo qulqulka qalabka akhristayaal badan. Tilmaamahan, waxaan ku tusineynaa sida looga duubo mashiinkaaga Windows-ka TV-ga. Waxaan rajeyneynaa inuu hagaheena ka jawaabi doono dhammaan su'aalahaaga. Fadlan nala soo socodsii khibradaada qulqulka adigoo adeegsanaya qalabkan. Waqti fiican ku raaxeyso madadaalo aan xadidneyn shaashadahaaga waaweyn.
Goobaha Bixinta Filimka Bilaashka ah (2020) Bilaash Saxiix
Sanduuqa TVga ee ugu wanaagsan Android
Sidee Loo Daawadaa Disney Plus On Roku?
Sidee loo Dhaqaajiyaa TV-ga Pluto?
amazon bilaash ah maxkamad 30 maalmood ah
sida looga daawado tv-ga lacag la’aan khadka tooska ah
sidee i rakibi chromecast on my laptop?
roblox sida aad u heli alaabta kooban for free
itunes kee baan soo dejisan karaa
hulu live-dhimista ardayga tv
website si xor ah u movies watch